बर्खा लाग्यो: पाइँदैनन् खेताला, चल्न छोड्यो अर्मपर्म ! - नेपालबहस
बर्खा लाग्यो: पाइँदैनन् खेताला, चल्न छोड्यो अर्मपर्म !
| १०:२९:१२ मा प्रकाशित
२७ जेठ, बलेवा ।
बर्खा लाग्यो।।। झ्याउँकिरी बास्न थाल्यो, भ्यागुता करायो, हाम्रो भेट हरायो।।।’
गीतमा भनिए जस्तै अर्मपर्म चल्ने गाउँ अहिले खाली छन् । सबै युवा विदेश भएकाले गाउँमा खेताला, खेताली पाउनै मुस्किल छ । अर्मपर्म त एकादेशको कथा जस्तै हुन थाल्यो । “धान रोप्न खेतालाको जोहो एक महिना अघिबाटै गर्नुपर्छ, नत्र समयमा रोपाइँ गर्नै सकिँदैन”, जैमिनी नगरपालिका–१० राङ्खानीका डिलप्रसाद पौडेल भन्छन, “पर्मको कुरा छाडौँ, ज्यालामा काम गर्ने पनि पाउनै मुस्किल छ, युवा विदेश छन्, कसले गर्ने दुःख ?”
गाउँमा बसेका केही युवाका पनि आफ्नै व्यवसायिक फार्महरु छन् । कसैले कुखुरा पालेका छन्, कसैले गाईभैँसी, बाख्रा र तरकारी तथा नगदेबाली । व्यावसायिक बनेका युवाले सिजनको खेतीका लागि समय दिन नसक्ने किसानहरु बताउँछन् । “धान रोप्ने बेला भयो, खेतला पाइँदैनन्, पाएका पनि महँगा छन्”, बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानका किसान केशव सुवेदी भन्छन, “सिजनको खेती गर्न कठिन भइसक्यो ।”
पछिल्लो समय आएको प्रविधिले किसानलाई सघाएको छ तर बर्खे खेतीको समयमा भने प्रविधिको गतिसँगै चल्ने जनशक्ति पनि चाहिन्छ । एक हल गोरुले दिनभर लगाएर रोप्ने खेत अहिले मिनीपावर ट्रिलर ‘यान्त्रिक हलो’ले केही घण्टामै हिलाउँछ । सोहीअनुसार आली लगाउने, छेउकुना खन्ने र सम्याउने जनशक्ति चाहिने सुवेदी बताउछन । एक हल गोरुका पछि लाग्नेभन्दा दोब्बर खेताला मेसिनका पछि चाहिने उनको अनुभव छ ।
यहाँ दिनभरि काम गर्दा पाउने ज्यालाभन्दा विदेशमा हुने दैनिक कमाइ धेरै हुने भएकाले युवाहरु गाउँ बस्न नमान्ने थापाको अनुभव छ । सिजनमा मात्रै हुने खेतीपाती र खाली समयमा रोजगारी नहुँदा पनि युवाहरु गाउँमा अड्याउन नसकेको उनले सुनाए । ठूला फाँट र एकैपटक धान रोप्ने समयमा सबैभन्दा बढी किसानलाई समस्या हुने गरेको छ । रासस
नेपाल बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्दै ४ दिन पहिले
शिखर इन्स्योरेन्सको हकप्रद निष्कासनको लागि एनआईएिबल एस क्यापिटल बिक्री प्रवन्धकमा नियुक्त ३ हप्ता पहिले
अहिले बुद्धिले लड्ने समय हो तरवारले लड्ने समय सकियो: मन्त्री मनाङे २ हप्ता पहिले
अनलाइन भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत माओवादी केन्द्रको आकस्मिक बैठक जारी ४ दिन पहिले
आज एकैदिन २६ फरार प्रतिवादी पक्राउ ८ महिना पहिले